မြသပိတ်ရေပြာအိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Copy/Paste » မြသပိတ်ရေပြာအိုင်	5
Posted by သျှားသက်မာန် on Dec 31, 2016 in Copy/Paste |5comments
မြသပိတ်ရေပြာအိုင်ကို သွားရာလမ်းတလျှောက်မှာ မျက်စိတဆုံး ပန်းခင်းများကို မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အပြင် ဖြူ၊နီ၊ပြာ၊ဝါ၊စိမ်း အစရှိတဲ့ လယ်ကွက်မျိုးစုံကိုလည်း တဝကြီး ရှုမြင်ခံစားနိုင်လို့ပါ။
ဒါ့အပြင်…….ရေပြာအိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ သုံးဆင့်ရေတံခွန်ကြီးကလည်း ရေကူးကစားဖို့ အသင့်တော်ဆုံး အချိန်ပါ။
တည်နေရာ……ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဖြစ်တဲ့ ရွာငံမြို့နယ် တောကြယ်ကျေးရွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။
ရေအိုင်တစ်ခုလုံး တကယ့်ကို ပြာလဲ့နေပြီး ဟိုးအောက်ခြေအထိ ကြည်လင်စွာ မြင်ရပါတယ်။
ရေထဲမှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ အပင်ကြီးတွေကလည်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါ။
အတော်ကြီးမားတဲ့ ငါးကြီးများလည်း ကူးခတ်နေကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
အခြားရေအရောင်နှစ်မျိုး စီးဝင်နေပေမယ့် ရေပြာအိုင်က အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရေခမ်းခြောက်ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒေသခံတွေက ဒီရေပြာအိုင်ဟာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ မြသပိတ်ကြောင့်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် မလေးမစားပြုမူခြင်း၊ ရေထဲဆင်းခြင်း၊ ရေကိုသယ်သွားခြင်း အစရှိသည်တို့ကို တားမြစ်ထားပါတယ်။
ရေပြာအိုင်ကို မကြာသေးခင်နှစ်များကစလို့ အွန်လိုင်းမှတဆင့် လူသိများလာပါတယ်။
ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ လူဦးရေ နှစ်ရာကျော် လာရောက်လည်ပတ်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒေသထွက် သီးနှံ၊အစားအသောက်တွေအပြင် ပျားရည်ကောင်းကောင်းလည်း ရနိုင်ပါတယ်။
သုံးဆင့်ရေတံခွန်နဲ့ လည်း အရမ်းနီးပါတယ်
ကထူးဆန်း says: ခုလောလောဆယ်တော့ မန္တလေး ရွာငံ ကားလမ်း ချဲ့ နေတဲ့ အတွက် လမ်းက ဖုန်တအားထူ နေပါတယ် … မိုးတွင်းကျ ရွံ့ ဗွက် တွေ နဲ့ လမ်းချော် နိုင်တယ် .. တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက် တော့ သွားလို့မကောင်းတော့ဘူး…. အဲ့သွားတဲ့ ရှုမျှော်ခင်းကတော့ အရမ်းကြို က် . အောင်ပန်း ပင်းတယ ဘက် က သွားမယ်ဆိုရင်တော့ လမ်းတော်တော်ကောင်းတယ် ပြောရပါမယ် ….
ပင်းတယ ဘက် ကသွားရင် တောင်စောင်းပေါ်မှာတက်ကြည့် စရာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဘုရားတွေ တည်ထားတဲ့ တောင်စွန်းတစ်ခုလဲ ရှိလေရဲ့ ..
နှစ်ခု လုံးက တစ်နေ့ တော့ ၀င်မယ် ဆို ပြီးခုထိ တော့ဖြတ်ဖြတ်သွားဆဲ ဘဲ ရှိပါသေးတယ် ..
သျှားသက်မာန် says: ဟုတ်….ခုလည်းသွားနေကြတဲ့သူရှိနေတော့တင်ပေးလိုက်တာပါ…တစ်နေ့ တော့မွန်လေးလည်းသွားပါဥိးမယ်
Thint Aye Yeik says: အိုဘယ့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း
Ma Ei says: တီအိတို့ 17/09/16 ကရောက်ခဲ့တယ်။ ကလော အောင်ပန်းကနေ သွားတာပါ။ လမ်းတလျှောက်မှာ ဂေါ်ဖီခင်းတွေဆိုတော့ စိမ်းစို ကောင်းကင်ပြာနဲ့တိမ်တွေကပြာလွင်ဖြူ သာယာလှပလိုက်တာများ တကယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်။ မိန်းမရဲ သခင်မတောင်ကိုလဲ မောပေမင့်ရောက်အောင်တက်ခဲ့တယ် တောင်ပေါ်ကမြင်ကွင်းဆိုတာများလှချက် ထပ်သွားဦးမယ် စိတ်ကူးတယ်…
သျှားသက်မာန် says: ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲလိုလှတဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိနေပါလားဆိုတာတိုးလုပ်ငန်းလုပ်တော့မှပဲသိပါတော့တယ်..